Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ndị na-ebunye ihe n'ụdị China America |Shengte
Ogologo: 1000m ma ọ bụ obere
Ọsọ ifufe: ≤35m/S (ọ bụghị ihe karịrị 700Pa)
Ambient okpomọkụ: kacha elu okpomọkụ +40 ℃, kacha ala -35 ℃.
Iru mmiri dị ala: kwa ụbọchị pụtara ọ bụghị ihe karịrị 95%, kwa ọnwa pụtara ọ bụghị ihe karịrị 95%.
Shockproof: nkezi uru kwa ụbọchị abụghị ihe karịrị 0.4/s2, osooso kwụ ọtọ abụghị karịa 0.15mm/s2.
Mmasị nke saịtị nwụnye: ọ dịghị ihe karịrị 3 Celsius.
Gburugburu nwụnye: ntinye n'ọkụ ọ bụla, ihe egwu mgbawa, mmetọ dị njọ, corrosion kemịkalụ na ịma jijiji ime ihe ike nke ebe ahụ.
Ọ bụrụ na gafere ọnọdụ ndị dị n'elu, ị nwere ike ịkpọtụrụ Ụlọ ọrụ ahụ.
Ngbanwe ụdị igbe:dakọrọ na ngwakọta (ụdị igbe) substation.
Igbe ụdị transformer bụ etiti Ọdịdị, welded na ngalaba ígwè, etiti kpuchie na aluminum alloy efere, na ntekwasa na pụrụ iche agba oyi akwa, nke mere na ọ nwere ike n'ibu Njirimara, ihu igwe na-eguzogide, corrosion resistance.Mgbe jikọtara ụdị (igbe ụdị) substation bụ integral Ọdịdị, igbe na-ekewa n'ime atọ dịtụ onwe ụlọ na ígwè efere, ya bụ, elu voltaji ụlọ, transformer chamber na ala voltaji chamber. Lighting n'ime ụlọ ọ bụla na-akpaghị aka gbanyụọ na oghere nke ụzọ.
Enwere oyi akwa mkpuchi okpomọkụ n'elu ọdụ ụgbọ mmiri jikọtara (ụdị igbe).N'ebe dị elu na ebe oyi na-atụ, okpomọkụ dị n'ime igbe ahụ dị mfe ịkwakọba ma gbanwee, ya mere, a na-agbakwunye ihe mkpuchi mkpuchi okpomọkụ n'akụkụ igbe ahụ. Iji mee ka okpomọkụ dị n'ime igbe ahụ kwụsie ike, ụlọ ihe ntụgharị na obere ọkụ eletrik. A na-eji ngwaọrụ njikwa okpomọkụ emebere ụlọ.
Ngwakọta (igbe ụdị) substation nwere ike n'ụzọ dị irè igbochi mbuso agha nke obere anụmanụ. The mmezi nke transformer na-adị mfe propelled na dọpụtara site a dismountable trolley. Abụọ n'akụkụ nke igbe ahu isi na-nyere na anọ kwekọrọ ekwekọ ebuli bolts na ike dọpụtara. na ịkwanye, na akụkụ abụọ nke elu mkpuchi elu na-enye nkwado anọ nwere otu ọrụ ahụ, nke nwere ike ibuli ma bufee ya n'ozuzu ya.
Ngwakọta (igbe) substation, na-emi esịnede akwa voltaji switchgear, ike transformer, ala voltaji switchgear atọ akụkụ jikọtara ọnụ na mejupụtara a zuru ezu set nke n'èzí, mmanụ transformer nkesa ngwaọrụ.The ngwaahịa nwere àgwà nke siri ike zuru ezu set, obere ọrụ ebe, obere ntinye ego, nrụnye na nhazi dị mma, ọdịdị mara mma, ike ihu igwe siri ike na ihe ndị ọzọ.
A na-eji ya eme ihe n'ụlọ elu dị elu, ebe obibi, ogbunigwe, ala mmanụ, nkesa ike ọha, ọdụ ụgbọ mmiri, wharves na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ebe ọkụ nwa oge maka ikesa ọkụ.
Ihe mkpuchi zuru oke, kọmpat ihe owuwu, ihe mkpuchi zuru oke, ọdịdị mara mma, olu bụ naanị ihe dị ka 1/3 nke ọdụ igbe (European box Transformer) .Ọ dịghị ụlọ nkesa ike, enwere ike itinye ya ozugbo n'ime ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí, enwere ike itinye ya na abụọ. akụkụ nke okporo ámá na eriri green, iji hụ na nchekwa nke onwe, ma ụlọ ọrụ ọkụ eletrik, ma na-achọkwa gburugburu ebe obibi.
Nabata usoro nchebe zuru oke nke fuse abụọ, nke na-ebelata ọnụ ahịa ọrụ nke ukwuu.
Enwere ike iji ya mee ihe maka ọkụ ọkụ ọnụ na mgbanaka netwọk eletrik, ntụgharị ahụ dị nnọọ mma, iji hụ na ntụkwasị obi na mgbanwe nke ike ọkụ.
Enwere ike ịtinye isi eriri aka aka 10kV wee wepụ ọtụtụ oge n'okpuru ibu 200A ugbu a.Enwere ike iji ya dị ka ngbanwe ibu na mberede ma nwee njirimara nke nkwụsịtụ ngbanwe.
Na-anabata ụdị ụlọ 9, ụdị nkesa nkesa 11, nke nwere obere mfu, obere mkpọtụ na ogologo ndụ ọrụ.
Ụdị ihe ngbanwe nke igbe na-etinye uche na nhazi nke ihe ntụgharị omenala na ụdị igbe igbe, nke nwere njirimara nke obere olu, ịdị arọ, obere mkpọtụ, obere ọnwụ, ntụkwasị obi dị elu na ihe ndị ọzọ.A na-eji ya eme ihe na ebe obibi, ebe azụmahịa, ọdụ ọkụ, ọdụ ụgbọ elu, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ogbunigwe, ụlọ ọrụ, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ na ebe ndị ọzọ.
Iji gburugburu ebe obibi:
Ambient okpomọkụ: kacha okpomọkụ +40 degrees, kacha nta okpomọkụ -30 degrees dwarf ụdị
Elu: ihe na-erughị ma ọ bụ hà nhata 1000M
Okpomọkụ: kwa ụbọchị pụtara ọ bụghị ihe karịrị 95[%], kwa ọnwa pụtara ọ bụghị ihe karịrị 90[%]
Ebe nwụnye: ikuku gbara ya gburugburu kwesịrị ịbụ nke gas na-ere ọkụ na-ere ọkụ, uzuoku mmiri na mmetọ ndị ọzọ doro anya, saịtị ntinye na-enweghị ịma jijiji na-eme ihe ike.
Ebe nrụnye kwesịrị ịbụ nke na-enweghị mmetọ doro anya, ihe mgbawa, gas na-emebi emebi na uzuzu, na ebe nrụnye kwesịrị ịbụ nke na-enweghị mmetụta ịma jijiji na-eme ihe ike.Ala ọmajiji kpaliri ala osooso AG: ala karịa 3m/s2 na kehoraizin direction na ala karịa 1.5m / s2 na vetikal direction (nsogbu seismic n'ime nke a ịgba ekwesịghị ichebara pụrụ iche na imewe).
Nke gara aga: Onye na-eweta OEM maka 10KV Class S11 Series On-Load Voltage-Regulared Distribution Transformers-shengte
Osote: mgbanwe ụdị euro
Ọnụ ahịa kacha mma Igbe ọhụrụ Transformer Tra...